होलीमा कसरी जीवनलाई सप्तरंगी बनाउने ? – Merokarnali
मेरो कर्णाली । २०७५, ४ चैत्र सोमबार मा प्रकाशित
काठमाडौं । होली मनाउने मुडमा हुनुहुन्छ ? निश्चय पनि बर्षदिनमा एकपटक रंगहरुको उत्सव मनाउने मौका उम्कन दिने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसो हो भने, कसरी होली मनाउँदै हुनुहुन्छ त ?
यो पर्व किन मनाउने त ? मूल प्रश्न यही हो । यससँगै होली कसरी मनाउने भन्ने उत्सुकता पनि जाग्नसक्छ ।
होली खासमा सप्तरंगी पर्व हो । यसको संकेत हो, जीवन पनि सप्तरंगी हुनुपर्छ । उत्साह र उमंगमय हुनुपर्छ ।
अहिले हामी धपेडीमा छौं । हामी विहान उठेदेखि जिन्दगीको रेसमा यसरी दौडिरहेका छौ कि, आफैलाई बिर्सिएर वेग मार्दैछौ । करियर, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, वैंक व्यालेन्स, ऐश-आरमको चक्करमा हामीले आफ्नो जीवन-अस्तित्व मेटाउँदै गएका छौं । जीवन के हो ? कसरी जिउने ? यी हाम्रा प्राथमिकताबाट हट्दैछन् । यसको साइड इफेक्ट के भने, हामी तनावग्रस्त हुँदैछौं ।
हामी दिमागमा प्रतिस्पर्धा, धपेडी, तनाव, इष्र्या बोकेर वेग हानिरहेका छौं । यहि कारण त हामीलाई विहान खानेबेला, राती सुत्नेबेला औषधीको डोज लिनुपर्छ ।
वर्तमानमा हामी आफैलाई भुलेर जीवनबाट विमुख हुँदैछौं । यही कारण हाम्रो जीवन निरास एवं उदास हुँदैछ । फिका र श्यामश्वेत हुँदैछ ।
अतः प्रकृतिको यो सप्तरंगी पृष्टभूमीमा हामी किन रंगीन नहुने ? हामी किन उमंगित नहुने ?
भनिन्छ नि, हामीले सधै प्रकृतिसँग लय मिलाउनुपर्छ । प्रकृतिसँगै नाच्नुपर्छ र प्रकृतिकै धुन अलाप्नुपर्छ । जब हामी प्रकृतिसँग एकाकार हुन्छौं, जीवनको धुन फेला पार्छौं । जीवनको माधुर्य प्रतिध्वनीत भएको अनुभूत गर्छौं ।
होलीमा रंगहरुको पर्व मनाउनुको ध्येय हो, जीवनलाई सप्तरंगी बनाउनुपर्छ ।
अँ तपाईं होली कसरी मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? संभवत रंग एवं अबिर ल्याउनुहुन्छ । पानी, पिचकरी र लोलाको व्यवस्था गर्नुहुन्छ । पानी छ्याप्नुहुन्छ । रंग दल्नुहुन्छ । लोला हान्नुहुन्छ ।
अझ तपाईं किशोरवय वा युवाअवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईंले अनेक किसिमको रसायनले आफुलाई रंगाउनुहुनेछ । बेपरवाह बाटोमा हिँड्नेलाई वा आफुले देखे जतिलाई लोला हान्नुहुनेछ । मौका परे पानीले निथु्रक्क भिजाइदिनुहुनेछ ।
शरीरभर रंग दलेर, कपाल र अनुहारलाई बहुरंगी बनाएर सडकमा जत्था बनाएर हिँड्नुहुनेछ । वाइकमा विन्दास हुँइकनुहुनेछ । वा छतमा बसेर लुकीलुकी बटुवालाई पानी छ्याप्नुहुनेछ ।
अब सोच्नुहोस् त, के तपाईंले होली खेल्नुभयो ? कि अरुलाई सताएर त्यसबाट भद्दा मनोरञ्जन लिनुभयो ?
होलीको मर्म, महिमा, महत्व र मूल्य एकातिर छ । तर, हामी होलीलाई भद्दा मजाक बनाइरहेका छौं । अतः होलीबाट हामीले असली उमंग लिन जानेकै छैनौ । त्यसो भए कसरी खेल्ने त होली ?
हरेक चाड पर्व आपसी सद्भाव, सौहार्द्धता फैलाउने एवं कायम राख्ने मेलो पनि हो । हामीले यस्ता चाडपर्व मनाइरहँदा आफुले मात्र आनन्द लिएर हुँदैन, अरुलाई आनन्दित तुल्याउनु पनि पर्छ । यसर्थ रंगहरुको उत्सव मनाइरहँदा अरुलाई दुःख, कष्ट दिने होइन, आपसी खुसी साट्ने हो ।
होली खेल्नुपूर्व कस्तो रंग प्रयोग गर्ने ? कस्तो पहिरन लगाउने ? सुरक्षाको के कस्ता विधी अपनाउने ? कहाँ खेल्ने ? कोसँग खेल्ने ? कसरी खेल्ने ? मोटामोटी खाका तयार गर्न सकिन्छ ।
अक्सर आफ्नै घरपरिवार, नातेदार, साथीभाईवीच अबिर दलेर होली खेल्ने गरिन्छ । होली खेल्दा पुराना एवं उज्यालो रंगको पहिरन लगाउने गरिन्छ । कपाल, अनुहारको छाला आदिमा रंगको असर हुनसक्ने भएकाले हेयर आयल, जेल, क्रिम आदि प्रयोग गरिन्छ ।
खासगरी होली होलीका लागि अबिर प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ । अझ संभव भएसम्म त प्राकृतिक रंग, जस्तो कि, फूल, पात आदिको रंग, चन्दन आदिको रंग बनाएर होली खेल्ने गरिन्छ । यस किसिमको रंग छालामैत्री हुन्छ । होली खेल्दा मिठोमसिनो खानेकुरा, संगीत आदिको पनि व्यवस्था गरिन्छ । साथै होली खेलिसकेपछि सरसफाईका लागि पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
रंगहरुको पर्व मनाउने आ-आफ्नै तौर तरिका, शैली हुनसक्छ । यद्यपी यसले कसैलाई हानी गर्नु, दुःख दिनु भनेको यस पर्वको वास्तविक मर्मलाई नबुझ्नु हो ।